IGERMAN ARTİKELLER, ARTİKEL, GESCHLECHTSWORT
Sawubona bathandwa, isiJalimane inkulumo enesihloko esithi sihloko izihloko banelukuluku lokwazi mayelana lesi sifundo ikakhulukazi Wabasaqalayo ukufunda abangane isiJalimane, nokuthi ngezinye izikhathi ophoqelelwe abantu abaningi bekuthola kunzima ukuqonda Ama-Articels aseJalimane Sizoxoxa ngakho.
Ezifundweni zethu zokuqala, sathi iziqalo zamagama ejwayelekile ngesiJalimane kufanele zibhalwe ngofeleba nokuthi igama lohlobo ngalunye linendatshana.
Esifundweni sethu esibizwa ngokuthi ama-athikili ngesiJalimane, sizoqala sikhulume ngokuthi yini i-athikili, zingaki izinhlobo zezindatshana zesiJalimane, nokuthi imaphi amagama aphambi kwalezi zihloko. Ekugcineni, sizokuqinisa lokho esikuchazile ngezibonelo futhi sizophetha ngokuhlolwa kwesihloko kwezindatshana zaseJalimane.
Isihloko semibhalo yesiJalimane siyisihloko esibaluleke kakhulu. Kumele ifundwe kahle kakhulu. Izindatshana zaseJalimane Akunakwenzeka ukuthi ukhulume futhi ubhale kahle isiJalimane ngaphandle kokufunda ukuthi mangaki ama-athikili akhona. Ikakhulukazi ezifundweni ezifana namabizo nemisho yesiphawulo sihloko ku Kuzokwenza umsebenzi wakho ube lula ukuba nemininingwane emihle kakhulu mayelana.
Ngemuva kokufunda inkulumo ezihlokweni zaseJalimane, sincoma ukuthi uvivinye izindatshana zesiJalimane ngemibuzo embalwa ekugcineni kwesifundo. Manje ake sinikeze izihloko zethu bese siqala isifundo sethu.
IZIXWAYISO ESISEKELWE EGULANI
Isihloko salesi sihloko siboniswa njengenye yezihloko ezinzima kunabo bonke abafundi baseJalimane.
Kulesi sigaba, sizokwenza lokhu futhi sinethemba lokuthi uzobona ukuthi lokhu akuyona inkinga enzima kakhulu.
Ake siqaphele ukuthi uma ubamba ngekhanda amagama kanye nama-athikili awo, ngeke ube nenkinga enkulu ngalokhu. Kepha, nokho, sizokwenza ukuqoqwa okubanzi ngale ndaba futhi sihlole ukuthi iziphi izinhlobo zamagama ezisetshenziswayo nodaba.
Manje ake siqhubeke.
EJalimane, amagama obulili anesithunzi, futhi kunezinhlobo ezintathu.
NgesiJalimane, amabizo angabesilisa, abesifazane, noma angathathi hlangothi. Ngakho-ke, i-athikili ephambi kwegama iyashintsha ngokuya ngobulili begama.
Kunezinhlobo ezimbili zama-athikili ngesiJalimane, eyokuqala eyimibhalo ecacile kanti eyesibili yizindatshana ezingaziwa.
NgesiJalimane, izindatshana ezithile zibizwa ngokuthi, ama-das nama-die articles.
Izindatshana ezingapheli ngesiJalimane yizihloko ze-ein ne-eine.
Kukhona nendatshana ethile kanye nomqondo wendatshana ongaziwa esiNgisini. Abangani abathatha izifundo zesiNgisi bangasiqonda kangcono lesi sihloko. EsiNgisini, le ndatshana i-athikili ecacisiwe, futhi kunezindatshana ezi-2 ezingaziwa, a no an. Ukusetshenziswa kwendatshana ethize ne-athikili enganqamuki esiNgisini kuyefana nalokho kwesiJalimane.
Imibhalo ethile nezindatshana ezingapheli ngesiJalimane Sathi kunezinhlobo ezimbili zezindatshana, okungukuthi.
Ngakho manje uthi, eyaziwa ngokuthi ama-das and die articles Imibhalo ethile yaseJalimane Ake sinikeze imininingwane mayelana:
IsiJalimane der das uyafa Kutholakala elinye lamagama. Lawa magama awanakho okufana neTurkey futhi awanakuhunyushwa ngokuphelele olimini lwethu. Lawa magama anjengengxenye yegama akulo. Ngenkathi ufunda igama, kuyadingeka impela ukuthi ufunde i-athikili yalo ndawonye njengokungathi yigama elilodwa elinegama. It das diAmagama e ahlukaniswa njengezihloko ezithile.
Uma uvele ukhumbule igama ngaphandle kokufunda i-athikili, igama olifundile ngeke lenze lukhulu. Amabizo ngesiJalimane, ubuningi, ubuningi, izigaba zesiphawulo, njll. Ukubaluleka kwama-athikili kuzoqondakala kangcono. Artikel kwezinye izinkomba imesdefinely”Abanye baboincazeloIdlula ithi ”. Ngaphezu kwalokho, izindatshana zifingqiwe kwizichazamazwi nakwimithombo eminingi njengoba kukhonjisiwe ngezansi. Sicela ugcine engqondweni izinhlamvu ezifingqiwe ezibonisiwe.
NgesiJalimane, i-athikili yamagama ezobulili ubulili babo kungowesilisa yi- "der".
NgesiJalimane, i-athikili ethi "die" yindatshana yamabizo obulili ubulili bawo okungowesifazane.
I-athikili yamabizo wobulili ngokobulili ngesiJalimane ithi "das".
Kodwa-ke, uma sithi ubulili bebizo, ake sinake okulandelayo: Kunzima ukwazi ubulili bamabizo ngesiJalimane, awukwazi ukubikezela ubulili begama kusuka encazelweni yalelo gama. Lokhu kumayelana nohlelo lolimi nokwakhiwa kwamagama. Ngakho-ke, lapho ufunda igama elisha, yini ubulili balelo gama futhi isihloko Ungafunda ukuthi kuyini kuphela kwizichazamazwi. Yize kunezindlela ezithile zokubikezela ukuthi ubulili ne-athikili yegama kungaba yini ngesiJalimane, kusese kunembile kakhulu. Kusichazamazwi sesiJalimane ukubheka nokufunda.
Izibonelo zama-athikili aseJalimane:
ngoBuch : Kitap
ngoTisch : Masa
kufa katze : cat
ngo-Baum : Isihlahla
afe Blume : Imbali
Das Auto : imoto
Izibonelo Ezibonisiwe Zokusetshenziswa Kwe-Artikel YaseJalimane
Lesi sithombe esilandelayo siqukethe amagama ngokusetshenziswa kwezindatshana ngesiJalimane.
Njengoba kubonakala kulesi sibalo, phambi kwe-genus der artikeli yesilisa, i-genus yezinsikazi phambi kwamagama amadololi kanye ne-das artikeli phambi kwamagama we-genus.
EJalimane, abukho ubudlelwano phakathi kobulili nencazelo yamagama, okusho ukuthi ayikho into efana nobulili bamagama aphumela ku-masculine, njengasesiNgisini, ukuthi amagama ahlobanisa uhlobo lobudoda nokwabesifazane.
Ubulili bamabizo ngesiJalimane bungafundwa kuphela ngekhanda esichazamazwini. Uhlobo lohlobo lwamabizo ezigabeni ezithile luqoqiwe. Ukuze ufunde kabanzi ngobulili bamabizo ngesiJalimane Amagama aseJalimane Ukulinganisa Ungabona indawo yethu.
Ukumelwa Kwezindatshana ZaseJalimane Kuzichazamazwi
Izihloko zaseJalimane Ezichazamazwini, njengoba sesibhale ngenhla manje, "der Tisch, die Katze" njll. azenzeki ngendlela. Amagama awabhalwanga kanye nezihloko zawo kwizichazamazwi zesiJalimane. Vele ubeke uphawu oluncane eduze kwegama bese isihloko kushiwo ukuthi kuyini. Imibhalo ifushanisiwe emithonjeni eminingi ngokulandelayo:
the artikel m noma r iboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu.
die artikel f noma e iboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu.
the artikel n noma s iboniswa ngokusebenzisa izinhlamvu.
Igama elithi eli m r noma i-art r ik izoba “art art,
Igama f f e noma e e “lizoba”,,
Igama n noma s igama elithi “art das.
Igama legama the Ezichazamazwini zaseJalimane, okuncane r incwadi ibekiwe
Igama legama die Ezichazamazwini zaseJalimane, okuncane e incwadi ibekiwe
Igama legama the Ezichazamazwini zaseJalimane, okuncane s incwadi ibekiwe
Lezi zincwadi nazor die das yizinhlamvu zokugcina zendatshana yabo.
Igama legama the kuyinto encane r incwadi, die eduze kwegama e incwadi, the ISE s Incwadi ibhaliwe. Lezi zincwadi nazor-due-ins yizinhlamvu zokugcina zendatshana yabo. Isibonelo, uma ubona uhlamvu r eceleni kwegama uma ubheka isichazamazwi, kusho ukuthi i-athikili yegama olibhekayo liyi-der, ngendlela efanayo, uma kukhona u-e eduze kwegama, kusho ukuthi igama lifa nendatshana, futhi uma kukhona u-s, kungama-das nalesi sihloko. Ezinye izichazamazwi MFN izincwadi, izincwadi ze-mfn mina maskulin, mina Femininum, Neutrum (Ubulili besilisa-ubulili besifazane-I-genus engathathi hlangothi) yiziqalo zamagama. Incwadi M der artikelini, Incwadi f i-artikelini, Incwadi N is das artikelini imelela.
Ngokuvamile, imithombo yezichazamazwi nezichazamazwi zingasetshenziswa ukukhetha noma yimuphi umthombo noma "m - f - n”Noma“r - s - e”.
Imishini ecacile nemishini engaqiniseki ngesiJalimane
Bangani abathandekayo, njengoba sishilo, ngenkathi sifunda igama lesiJalimane futhi sifunda igama elisha lesiJalimane, kufanele nakanjani sifunde lelo gama kanye nendatshana yalo.
Ukufunda igama Yini le ndatshana Kufanele sizibuze futhi sibheke. Kufanele siqoqe igama ngalinye esizofunda ngalo elisha ngokusho kwendatshana yalo bese silibhalela ubuchopho bethu ngaleyo ndlela.
Bangani abathandekayo, phambi kwamagama esizowasebenzisa emshweni izindatshana ezithile Ile aziwayo, esikushoyo kuqondakala kalula, eshiwo ngaphambili izinto ziyachazwa. Isb. "ngilidlile i-apulaKuyaqondakala ukuthi i-apula okukhulunywe ngalo emshweni yi-apula elalaziwa ngaphambili. Ngakho “ngilidlile i-apulaNge "isigwebo"ngilidlile lelo apula”Isigwebo sinikeza incazelo efanayo. Kulo musho, okushiwo kulo musho ngu "elmaKusho ukuthi i-apula elaziwayo liqondwa njenge-apula elishiwo ekuqaleni, phakathi.
Imibhalo ethile ngesiJalimane der - das - die Sinikeze imininingwane ngalezi zihloko.
Manje ake sinikeze imininingwane ethile mayelana nama-athikili angaziwa ngesiJalimane.
Izihloko ezingapheli ngesiJalimane
German der - das -die ngaphandle kwama-athikili athile ein futhi eine Kunezindatshana ezimbili ezingaziwa, okungukuthi.
Amagama u-Ein no-eine asho ukuthi "munye" noma "noma ngubani." Zingahunyushwa ngale ndlela.
Ngakho-ke, kusetshenziswa maphi amagama ama-athikili ein no-eine, futhi yimaphi amagama andulelwa yizihloko u-ein no-eine?
Onke amagama angabesilisa nabobulili anesihloko esithi phambi kwabo.
Onke amagama abesilisa besifazane ane-athikili eine phambi kwabo.
Noma singasho lokhu ngenye indlela. Njengoba sesishilo ngenhla, i-athikili ethile yamagama abesilisa besilisa kwakuyi-athikili ethi "der". I-athikili ecacisiwe yamagama angenabulili kwakungu "das". I-athikili yamagama abesifazane ngokobulili kwakuyi-athikili ethi "die".
I-athikili engenamkhawulo yamagama anegama elicacile elithi der or das yi-athikili.
Uma amagama anokufa okucacile ene-athikili engapheli, u-eine uyindatshana.
Manje uzokusho lokho phambi kwamagama esiJalimane okuqondile kuzoba njalo? okungapheliyo kuzoba njalo Phambi kwamagama der - das - die Ngabe eyodwa yalezi zihloko izotholakala noma ein - eine Ngabe eyodwa yalezi zihloko izotholakala?
Ake siphendule lo mbuzo manje. I-athikili eyinhloko ngumbhalo othize.ngakho-ke der-das-die izihloko. Lapho ufunda igama, kwanele ukuthola ukuthi lelo gama liyi-athikili, ama-das noma afe. Kucacile ukuthi iyiphi i-athikili ein ne-eine, okusetshenziswe ama-athikili angaqinisekisiwe, ukuthi kusetshenziselwe yiphi indatshana. Njengoba sishilo ngaphambili, Uma esho i-athikili ethile yegama lesiJalimane, i-athikili engenamkhawulo yalelo gama ngu-ein. Uma i-athikili ethize yegama lesiJalimane lingu-das, i-athikili engapheli yalelo gama nayo i-ein., Uma umunci ocacile wegama lesiJalimane uyi-die article, i-athikili engaziwa yalelo gama yi-eine article.
Uma igama elisetshenziswe emshweni, igama elisetshenzisiwe, into, into noma ngabe yini, uma futhi yaziwa yilowo obhekele indawo noma abantu, uma ngabe kushiwo ngaphambili, uma leyo nto ibonwe noma yaziswa ngayo , ngamafuphi, into eyaziwayo Uma kunjalo, kunendatshana ethile phambi kwaleli gama ezosetshenziswa emshweni.
Kodwa-ke, noma ngabe yiliphi igama, into, into, igama elizosetshenziswa emshweni, uma kungeyona into eyayaziwa phambilini, uma kuyinto, uma kuyinto engaziwa, i-athikili engaziwa, okusho i-ein-eine , lisetshenziswe phambi kwaleli gama.
Isibonelo, ake sibhale imisho emibili ehlukene sisebenzisa into efanayo engezansi:
Ngithenge leyo moto
Ake sibheke umusho wokuqala, “Ngathenga imoto"uthi. Uma utshela umuntu ukuthi ngithenge imoto, angathini kuwe? Oooo sikufisela inhlanhla, babuza imibuzo efana nokuthi uthenge ini, hlobo luni lomkhiqizo, ingabe lusha noma luyisekeni, malini kanye nokunye.? Ngakho-ke, njengoba kungaqondakala kusuka emshweni wokuqala, phambi kwegama lemoto emshweni wokuqala i-athikili engaziwa okungukuthi i-ein noma i-eine Kuzosetshenziswa i-athikili efanelekile. Manje iyiphi ezosetshenziswa? IsiJalimane ngegama lemoto Das Auto yizwi. I-athikili yi-das athikili. Ngakho-ke esikhundleni se-athikili ethile i-athikili engapheli Luzosetshenziselwa.
Ake sibheke umusho wesibili. Ngithenge leyo moto kusho. Leyo moto njengoba ushilo sekushiwo imoto. Kubukeka sengathi yimoto ebishayelwa, ibonwa noma kukhulunywa ngayo. Uma imoto kulo musho wesibili iyimoto eyaziwayo, khona-ke emshweni onjengalo i-athikili ecacisiwe okungukuthi yithi - das - die Kuzosetshenziswa eyodwa yezindatshana. Kulo musho ngoba igama lesiJalimane lemoto lithi das Auto Das Auto Igama lizosetshenziswa.
Lokhu ngumehluko phakathi kwama-athikili athile nezindatshana ezingapheli.
das Auto: imoto
i-ein Auto: imoto
das Buch: le ncwadi
ein Buch: incwadi
der Tisch: ithebula
ein Tisch: itafula
Isifinyezo Sezihloko ZaseJalimane
Bangani abathandekayo, sinikeze imininingwane ngezindatshana zaseJalimane, izindatshana zaseJalimane, izindatshana ezingaziwa, Izihloko zaseJalimane Yilokho kuphela esizokuthinta kule ndaba. Isihloko sezindatshana zesiJalimane ngesinye sezihloko ezidinga ukufundwa ngokucophelela okukhulu. Kungakho inkulumo yezindatshana zaseJalimane yenziwa ngokuningiliziwe ngale ndlela.
Izihloko zaseJalimane Sizamile ukuyichaza kabanzi ngoba iyindaba ebaluleke kakhulu.
Kunezinhlobo ezimbili zezihloko zesiJalimane.
Ku-German, der, kufa futhi ama-artikels abizwe ngokuthi i-artikel ethile.
Kukhona futhi izindatshana ezingaziwa, i-ein ne-eine. Kunencazelo eningiliziwe yazo zombili izindatshana kusayithi lethu.Ukuze ufunde kahle izindatshana zaseJalimane, zombili izindatshana ezithile kanye nama-athikili anganqamuki kufanele kufundwe kahle.Manje ake sinikeze izihloko zethu izixhumanisi kuzo zombili izindatshana ezithile kanye nezindatshana ezingapheli.
Ukufunda ngezihloko ezithile zesiJalimane
Ama-Artifacts angama-German angaqiniseki Ukulinda
NgesiJalimane, i-3 iyatholakala: i-der, das, die
Ukuhlolwa kwesihloko se-German Articulate Subject
Manje, thatha izikhathi ezimbalwa ukuze unqume ukuhlolwa kwesiJalimane.
Bangani abathandekayo ingosi yethu, okuyindawo enkulu kakhulu futhi ethandwa kakhulu yolimi lwesiJalimane eTurkey ibinendatshana yesiJalimane ebhalwe ngezifundo eziningi ezitholakalayo. Ngokusesha isigaba sokucinga sesayithi lethu noma Izihloko zaseJalimane Ungathola zonke izifundo ngezihloko zaseJalimane ngokuchofoza isihloko.
Ungabhala noma yimiphi imibuzo nemibono mayelana nezifundo zethu zaseJalimane kumaforamu e-almancax noma esigabeni sokuphawula ngezansi. Yonke imibuzo yakho ingaxoxwa ngamalungu e-almancax.
Uma ungazi ukuthi yikuphi okulandelayo ozolandela izifundo zesiJalimane Izinkulumo zesiJalimaneUngahlola i-. Ngokwale oda, ungalandela izifundo zethu zaseGerman igxathu negxathu.
# IZIXWAYISO ESISEKELWE EGULANI
# Ama-Articels aseJalimane
# Izibonelo Ezibonisiwe Zokusetshenziswa Kwe-Artikel YaseJalimane
# Ukumelwa Kwezindatshana ZaseJalimane Kuzichazamazwi
# Imishini ecacile nemishini engaqiniseki ngesiJalimane
# Izihloko ezingapheli ngesiJalimane
# Isifinyezo Sezihloko ZaseJalimane
# Ukuhlolwa kwesihloko se-German Articulate Subject
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-9 ezedlule, ngoMashi 13, 2021, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngoMashi 20, 2021.
Ama-Articels, Amazwi aseJalimane
Izinombolo zesiJalimane, Ukubala kweJalimane, Amanani AseJalimane
I-10a Izinombolo zesiJalimane zezingane
Izifundo zaseJalimane zeBanga le-10
Ukudla kwaseJalimane Iziphuzo zaseJalimane
Tags: 10. inkulumo yesi-German yesifundo, 9. inkulumo yesi-German yesifundo, isi-German artikel, isi-German artikeller, isi-German, i-artikel German, Iyini i-artikel, ukuchaza